सबै भन्दा पहिले जेष्ठ कम्युनिस्ट नेता खगुलाल गुरुङ प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन Û आइतवार बिहान ७ वजे लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममै १०४ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको उहाँका नाती विकास गुरुङले जानकारी दिनु भयो ।
कमरेड खगुलाल गुरुङको सम्पूर्ण जीवन देश, जनता, पार्टी र क्रान्तिका लागि समर्पित जीवन हो । वि.स. १९७५ साल भदौ २८ गते तत्कालीन बागलुङ जिल्लाको खरा (हाल प्यूठान जिल्ला अन्तर्गतकै रजबारामा गाविसमा पर्ने) मा उहाँ जन्मिनु भएको थियो र पछि गौमुखी गाउँपालिका–७ कैरामा बसाइँ सर्नु भएको थियो । उहाँको सम्पूर्ण जीवन कालमध्ये विगत ६९ वर्षको जीवन देश र जनता तथा पार्टी र क्रान्तिका लागि समर्पित र सङ्घर्षको जीवन हो ।
२००७ सालको निरङ्कुश राणा शासनका विरुद्धको सङ्घर्षका साथै उहाँको राजनीतिक जीवन सुरू भयो । त्यस सङ्घर्षका क्रममा उहाँले प्यूठान, सल्यान, नेपालगञ्ज सहित कैयौँ जिल्लामा निरङ्कुश शासनको अन्त्यका लागि सशक्त सङ्घर्षमा सहभागी हुनु भयो । २०१० सालमा उहाँको जीवनमा महत्वपूर्ण मोड आयो । उहाँ २०१० सालमा प्यूठानको विजयनगर (रातामाटा)मा प्रगतिशील अध्ययन मण्डलद्वारा सञ्चालित तिन महिने जनता शिक्षण शिविरमा सामेल हुनु भयो । त्यहाँको त्यस शिविरमा उहाँ शारीरिक प्रशिक्षक हुनु हुन्थ्यो । त्यसै बेला (२०१० साल मङ्सिरमा मा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्यूठानको उहाँ एकज ना संस्थापक सदस्य हुनु हुन्थ्यो । त्यही बेला प्यूठानमा स्थापित भएको अखिल नेपाल किसान सङ्घ, प्यूठानको पनि उहाँ संस्थापक सदस्य हुनु हुन्थ्यो ।
त्यही शिविरको बेला वा कम्युनिस्ट पार्टी र अखिल नेपाल किसान सङ्घको स्थापनाका साथ नै प्यूठानमा किसान आन्दोलनहरू सुरू भए । सर्वप्रथम त्यो किसान आन्दोलन नारीकोटमा सुरू भयो, जो फागुन २४ गतेको किसान आन्दोलनका नामले प्रसिद्ध छ । त्यो ऐतिहासिक आन्दोलनको उहाँ एउटा प्रमुख नेता हुनु हुन्थ्यो । त्यसपछि जिल्लाव्यापी रूपमा किसान आन्दोलनको आँधी नै आयो । ती सबै किसान सङ्घर्षमा का. गुरुङ अग्रपङ्क्तिमा रहनु हुन्थ्यो । उहाँको व्यक्तित्व र कार्यशैली यति धेरै जुझारू थियो कि सबै सामन्त र जाली फटाहा काँप्दथे ।
प्यूठानमा पार्टीको स्थापनापछि उहाँ पार्टी र किसान सङ्घका कैयौँ कार्यक्रममा सामेल हुनु भयो । त्यसै सिलसिलामा उहाँ २०११ सालमा पाल्पाको झडेवामा भएको पश्चिम गण्डक प्रान्तीय सम्मेलन तथा जनकपुरमा भएको अखिल नेपाल किसान सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सामेल हुनु भयो ।
प्यूठानको किसान आन्दोलनपछि जिल्लाका जाली फटाहा र सामन्तहरूले का. गुरुङ समेत किसान आन्दोलनका नेता र कार्यकर्ताहरूका विरुद्ध झुटा मुद्दाहरूको ओइरो लगाएर उहाँ समेत किसान आन्दोलनका कैयौँ नेताहरूका विरुद्ध बारेन्ट काटियो । त्यसपछि प्यूठानमा प्रशासनको भ्रष्टाचार र दमनका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेससित समेत मिलेर संयुक्त आन्दोलन चल्यो । त्यस आन्दोलनका सिलसिलामा विरोध प्रदर्शन गर्न खलङ्गा जानका लागि बाग्दुलामा बास बसेको बेलामा मोहनविक्रम सिंह, रूमबहादुर पाण्डे, नन्दलाल गुरुङ, सिद्धिमान सिंह र नेपाली काङ्ग्रेसका हेमराज पण्डित सहित उहाँ गिरफ्तार हुनु भयो । गिरफ्तार राजबन्दीले जेलमा हुने अन्यायका विरुद्ध सङ्घर्ष सुरू गरेपछि अन्य कतिपय साथीसहित का. गुरुङलाई पाल्पा जेल चलान गरियो । पाल्पा जेलमा छँदासम्म पनि उहाँले त्यहाँ जेलभित्र हुने अन्याय, अत्याचार र ठगीका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गरिरहनु भयो । त्यसपछि उहाँहरूलाई पुनः प्यूठान जेलमा चलान गरियो र प्यूठानबाट पुनः सल्यान जेल चलान गरियो । त्यहाँबाट गिरफ्तार सबै ६ जना राजबन्दीलाई २०१३ सालको कात्तिकमा जेलमुक्त गरियो । त्यसपछि छिट्टै काठमाडौँमा भएको पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा अन्य साथीसहित उहाँले प्यूठानबाट पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा भाग लिनु भएको थियो ।
सल्यान जेलबाट छुटेपछि उहाँले अन्य कतिपय साथी सहित अहिलेको रोल्पाको थवाङमा पुगेर पार्टी र किसान सङ्घको स्थापना गर्नु भयो । २०१५ सालको संसदीय चुनावमा उहाँ क्षेत्र नं. ८३ बाट उम्मेदवार बन्नु भयो । क्षेत्र नं. ८३ मा त्यस बेलाका बाइसखुवा र कालाशेष थुम वा अहिलेको रोल्पा जिल्ला पर्दथ्यो । त्यही बेला नै उहाँले थवाङमा पार्टीको बलियो सङ्गठनको आधार निर्माण गर्नु भयो । यद्यपि उहाँ उक्त चुनावमा पराजित हुनु भयो, तर थवाङ पार्टीको लौहकिल्लाका रूपमा निर्माण भएर दृढतापूर्वक अघि बढ्यो ।
२०१७ सालमा देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही शासनको स्थापना भएपछि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । पार्टीको तृतीय महाधिवेशनपछि पार्टी केन्द्रको विघटन भयो र पार्टी कैयौँ टुक्रामा बाँडियो । केन्द्रमा नेतृत्व दिने कुनै नेतृत्व बाँकी रहेन । त्यस विषम परिस्थितिमा गाउँका जनताले धेरै कर गरेपछि उहाँ प्रधान पञ्चमा उठ्नु भयो र विजयी पनि हुनु भयो । तर प्रधान पञ्च बनेपछि पनि सामन्त र जाली फटाहाका विरुद्ध उहाँले वर्गसङ्घर्ष चलाइ रहनु भयो । त्यसैले पञ्चायतमा उहाँ लामो समयसम्म टिक्न सक्नु भएन । पञ्चायतमा सामेल भएका प्यूठानका अन्य धेरै कम्युनिस्ट कार्यकर्ता पञ्चायती व्यवस्थामा नै बिलाउँदै गए । तर का. गुरुङ लगायत पार्टीको भूमिगत सङ्गठन र पञ्चायती व्यवस्था विरोधी सङ्घर्षका कार्यक्रममा सक्रिय भई रहनु भयो । प्यूठानमा चल्ने सबै सङ्घर्षमा उहाँ रात–दिन जहाँ पनि पुग्नु हुन्थ्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि चलेका सबै आन्दोलनमा उहाँको सक्रिय भूमिका रहन्थ्यो ।पछि २०५९ सालमा देशमा पुनः निरङ्कुश राजतन्त्रको स्थापना भएपछि चलेका सङ्घर्षमा पनि उहाँको सक्रिय सहभागिता रहने गयो ।
शारीरिक रूपले हिडडुल गर्न असफल भएर बिस्तारामा पल्टेपछि पनि कम्युनिस्ट पार्टी माथिको उहाँको आस्थामा कुनै कमी आएन । उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे कहाँ के भइरहेको छ ? त्यो जान्नका लागि सधैँ उत्सुकता प्रकट गर्नु हुन्थ्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनसित सम्बन्धित पुस्तक, पर्चा लगातार पढिरहनु हुन्थ्यो । उहाँले कान कम सुन्नु हुन्थ्यो । तर चश्मा नलगाई सानो अक्षर पनि पढ्न सक्नु हुन्थ्यो । पढ्नका लागि उहाँलाई कहिल्यै चश्मा लगाउनु परेन । उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनसित सम्बन्धित पुस्तक÷पत्रिका लगातार पढिरहनु हुन्थ्यो वा साथीसित मगाइ रहनु हुन्थ्यो । त्यस वाहेक उहाँले लगातार देशका वा गाउँघरका विभिन्न समस्या तथा आफ्नो जीवनका संस्मरणबारे लगातार लेख्ने काम पनि गरिरहनु हुन्थ्यो । यसरी उहाँले लेखेका थुप्रै सामग्री अहिले पनि सुरक्षित छन् । शारीरिक रूपले एकदम अशक्त भएपछि पनि कमरेड गुरुङले निरन्तर देखाउने उत्सुकता त्यस प्रकारको उत्साहले वास्तवमा उहाँमा उच्च रूपमा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको आस्था, निष्ठा र जीवनत शक्तिलाई नै बताउँछ ।
कमरेड खगुलाल वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा जीवित साक्षी तथा क्रान्तिकारी सिद्धान्त र आदर्शको एउटा प्रतिरूप हुनु हुन्छ । उहाँ एउटा त्यस्तो इतिहास पुरूषका रूपमा स्थापित हुनु भएको छ । जसको कम्युनिज्ममाथिको आस्था र विश्वासमा कहिल्यै कमी आएन । उहाँको जीवन कालमा विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै उथलपुथल भए । समाजवादका कैयौँ किल्ला र पार्टी ढले । त्यसको असर नेपालमा पनि प¥यो । कैयौँ कम्युनिस्ट नेताहरूले विचलन वा पलायनको बाटो समाते । स्वयम् प्यूठानका उहाँसँगै काम गरेका कैयौँ कम्युनिस्ट नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीबाट अलग वा निस्क्रिय हुँदै गए । तर संसारमा, नेपालमा वा उहाँको आफ्नै जिल्लामा देखिएका त्यस प्रकारका विचलन वा पलायनको बीचमा पनि खगुलाल गुरुङ कहिल्यै ढल्नु भएन । उहाँ कहिल्यै निराश हुनु भएन र कहिल्यै विचलन वा पलायनको बाटो समात्नु भएन । उहाँ सधैँ एउटा लौह स्तम्भ जस्तो भएर उभिइरहनु भयो । उहाँको जीवनको यो पक्ष नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो र यसबाट नै हामीले धेरै कुरा सिक्नु पर्दछ ।
उहाँको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय पक्ष यो हो कि उहाँ जीवनभरि नै समाजलाई बदल्न र समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गर्न तथा एउटा सुखी तथा उन्नत समाजको निर्माणका लागि सङ्घर्षरत भइ रहनु भयो । उहाँको कार्यस्थल प्यूठान थियो । तैपनि उहाँले जुन प्रकारको आदर्श कायम गर्नु भएको छ, क्रान्तिकारी सिद्धान्त, उद्देश्य र आदर्शका लागि अटुट रूपले र दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्ने जुन इतिहासको निर्माण गर्नु भएको छ, त्यसले देशका सबै कम्युनिस्टलाई शिक्षा र प्रेरणा दिन्छ । खास गरेर आज विश्व स्तरमा र नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यापक रूपमा देखा परेका विचलन र त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका अविश्वास, आशङ्का र निराशाको पृष्ठभूमिमा जीवनभरि नै बिना कुनै स्वार्थ क्रान्तिकारी सिद्धान्त, उद्देश्य वा आदर्शका लागि दृढतापूर्वक उभिइरहने उहाँको चरित्रले हामीलाई सदैव प्रेरणा दिन्छ ।
जुन बेला उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल हुनु भयो, त्यस बेला देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी थियो । आज त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन कैयौँ कित्तामा बाँडिएको छ । तैपनि यो खुसीको कुरा हो कि उहाँको सम्मान गर्न वा उहाँको अभिनन्दन गर्न नेपालका सबै कम्युनिस्टहरु उत्साहित पूर्वक सहभागि भएकोपनि हामीले ४ वर्ष अगाडि देखेका थियौं । वास्तवमा उहाँको आदर्श र सङ्घर्षशील व्यक्तित्वलाई स्मरण गर्ने हो भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई टुटफुट र विभाजन त्यागेर एकताका लागि प्रेरित गर्दछ । देशमा उपस्थित सङ्कटको सामना गर्नका लागि सबै कम्युनिस्ट पक्षको बीचमा एकताबद्ध भएर काम गर्ने वातावरण तयार पार्न सक्यो भने त्यो नै कमरेड गुरुङप्रतिको उच्च सम्मान हुनेछ । जनताको मनबाट ओझेल पर्न नसक्ने गरी भौतिक शरिरको अन्त्य भएको दुःखद क्षणमा कमरेड गुरुङलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली, शोकाकुल कम्युनिस्ट पार्टी परिवार तथा गुरुङको व्यक्तिगत घर परिवारमा हार्दिक समवेदना Û